पैसा तिर्नुपर्छ भनेर त्यो बाटो २ वर्ष सम्म हिडिन्ः नायक पल शाह - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
५ असार,२०७४ | Forsee Network
अभिनेता पल शाहको सिनेमा “म यस्तो गीत गाउँछु” असारको ३० गते रिलिज हुदैछ । सिनमाको ट्रेलर र गीतलाई धेरैले माया गरेका छन् । पलले म्यूजिक भिडियो हुदै “नाई न भन्नु ल–३” बाट सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । सिनेमाको प्रमोशनको क्रममा रेडियो अडियोमा आईपुगेका पलले आज हामी सग जिवनको केही रोमान्चक कुराहरु सेयर गरेका छन् –
शाहरुखको कम्पनी रेड चिल्लीमा काम गर्ने ठूलो धोको
मेरो जन्म दाङ्ग जिल्लाको रामपूर गाविसामा भएको हो । दाङ्गमा हुदा मेरो नाम पूर्ण विक्रम शाह थियो । मैले कक्षा ५ सम्मको अध्ययन दाङ्ग मै पूरा गरें । बिचमा माओवादीले बोर्डिङ्ग नै बन्द गराईदियो । त्यसपछि मैले कक्षा ७ मा एकै चोटी पढाई शुरु गरें । वि स. २०६१ एस.एल.सी. दिएर काठमाडौँ आएको हो । काठमाडौ आएपछि दाईहरु सँगै मिलेर एडिटिङ्गको काम गर्न थाले । त्यो बेला सम्म पनि मलाई सबैले पूर्ण भनेर चिन्नुहुन्थ्यो । पछि दाईले मेरो नाम लामो भयो भनेर पर्ल (मोती) राखिदिनुभयो । पर्ल पनि उच्चारण गर्ने गाह्रो भएर मेरो नाम पल हुन पुग्यो ।
मैले १७ वर्षको हुदाबाट एडिटरको काम गर्न थाले । काठमाडौको मिडिया हाउसमा एडिटिङ्गको साथै म्यूजिक भिडियो र डकुमेन्ट्रीमा पनि काम गर्न थालें । तराई टेलिभिजनमा काम गरेको २ वर्ष पछि म ग्राफिक्स एण्ड एनिमेसन पढ्न दिल्ली गए । दिल्लीमा पढाई सकेपछि मलाई मुम्बई गएर शाहरुख खानको प्रोडक्शन कम्पनी रेड चिल्लीमा टेक्निसियन भएर काम गर्ने धोको थियो । तर, दाईहरुले बोलाएर काठमाडौ आए । यहा आएपछि पनि म र मेरो दाई रेड चिल्लीमा काम गर्न जान तयार थियौ । तर, तराई टेलिभिजनलाई नया व्यबस्थापनले लिएको रहेछ । त्यहाको एउटा दाईले मलाई त्यही काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । अनि मैले त्यही काम गर्न थालें । त्यहाँ शुरुमा काम गरेको मसिक ५,००० कमाउथेँ । पछि मेरो कमाई २५,००० सम्म पुगेको थियो । तराई टेलिभिजनमा मैले एडिटरबाट एनिमेटरको रुपमा काम गरें । मिडियामा काम गरेपछि मोडल, निर्देशक, एडिटर लगायतका कलाकार सँग भेट हुन्थ्यो । त्यही क्रममा मेरो एक जना दाईले म्यूजिक भिडियो खेल्ने प्रस्ताव राख्नु भयो । अहिले पनि बेलाबेलामा एडिटिङ्गको काम गर्छु ।
लक्ष्य बिनाको त्यो यात्रा
एस.एल.सी. पछि प्लस टु पास गर्दा सम्म मेरो जिवनमा केही लक्ष्य थिएन । म निकै लजालु स्वभावको थिएँ । गाउँमा हुँदा म साथीहरु बटुलेर घुम्न र तास खेल्न निकै रुचाउथेँ । म रमाईलो गर्दै हिड्ने अल्लारे थिएँ । मलाई कक्षा ७ देखि नै तास खेल्न निकै मनपथ्र्योँ । १२ पछि बल्ल मेरो अलि फरक हिसाबले सोच्न थालें । त्यसपछि मलाई मैले जिवनमा केही गर्नुेपर्छ जस्तो महसुस हुन थाल्यो । आफंैले मेहेनत गरेर पैसा कमाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो । त्यसपछि बल्ल मैले एडिटिङ्गको काम सिकेको हो ।
पैसा कमाउन गरेको सङ्घर्षका ती दिन
काठमाडौँमा आएर पैसा नभएको कारण पनि धेरै निकै अप्ठयारो भएको थियो । बुबाले काठमाडौँ नजाऊ आर्मीमा लड भनेर कति भन्नुहुन्थ्यो । पैसा नभएको बेला मलाई याद छ एक दिन रत्नपार्कमा म जेरी स्वरी खान गएको थिएँ । मैले जेरी स्वरी एउटै होला भन्ने सोचेर ५ रुपैयाको स्वरी र पाँच रुपैयाको पुरी मगाएँ । म सँग केबल ५ रुपैया थियो । त्यहाँको दाईलाई बल्ल बल्ल फकाएर भोलि पैसा ल्याईदिन्छु भनेर हिडें । ५ रुपैया तिर्नुपर्छ भनेर लगभग त्यो बाटो २ वर्ष सम्म हिंडिन । त्यस्तो अरु धेरै अप्ठयारोहरु जिवनमा देखेको छु । अहिले चाँहि त्यो पसल त्यहाँ छैन । त्यहाँ भएको भए म साचैँ नै त्यहाँ जान्थें होला ।
५–१० रुपैया नहुने मान्छे मैले जब ३,५०० को जागिर खाएँ त्यसपछि मलाई जिवन गुजार्न अलि सहज भयो । एडिटिङ्गको लागि मैले कुनै कोर्स लिएको होईन । ईच्छा र शक्तिले मलाई त्यो पेसा प्रति आकर्षित गर्दै गयो । दाईको अफिसमा म लुकी लुकी जान्थें । दाईसँग म सुत्ने भनेर म उहाँको अफिसमा सुत्न जान्थेँ । दाईको मालिक सुतिसकेपछि मलाई दाईले उठ भाई सिक्न उठ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो । मिडिया हाउस बाट टेलिभिजनमा काम पाउनु पनि मेरो ठूलो मौका थियो । पछि म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गरें । माया पाउँदै गएपछि सिनेमामा पनि काम पाएँ । बुबाले मलाई टेलिभिजनमा देखेपछि बल्ल उहाँको रिस साम्य भएको हो । बुबाले भनेको बाटोमा नलागेको कारण उहाँ म सँग निकै रिसाउनुभएको थियो । उहाँलाई म आर्मी भईदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो ।
बुबालाई पैसा अहिले सम्म पठाएको छैन
“नाई नभन्नु ल–४” मेरो डेब्यू सिनेमा हो । सिनेमामा पहिलो पटक काम गर्न पाउँदा रातभरी सुतेको थिईन । त्यो सम्झिदाँ अचम्म लाग्छ । जिवनमा मैले गरेको हरेक कुराले मलाई प्रेरणा दिन्छ । त्यसपछि सुर्दशन थापाले मलाई “म यस्तो गीत गाउँछु” को अवसर दिनुभयो । उहाँले मलाई स्क्रिप्ट सुनाउनुभयो । अनि यदी यो स्क्रिप्टमा म योग्य छु जस्तो लाग्छ भने म काम गर्न तयार छु भनेर काम गरेको हुँ । कुनै बेला सोचेको जस्तो नतिजा नआईदिदाँ भने तनाव हुन्छ । अझै पनि मान्छेहरु त्यसलाई माथि जान न दिऊ, त्यसको खुट्टा तानौं कुरा काटौँ भन्ने छ । यो देखेर कुनै बेलामा तनाव लाग्छ । जिवन भनेको हरेक दिन केही कुरा सिक्ने रहेछ । मलाई धेरैले माया गर्नुहुन्छ तर मलाई अझ माया पाऊ हुन्छ । बुबालाई पैसा अहिले सम्म पनि पठाएको छैन । गिफ्ट भने बेला बेलामा पठाउछु । बुबा मैले गरेको एक फोनमा नै खुशी हुनुहुन्छ । मेरो नाम र चर्चाको कारण बुबा निकै खुशी र गर्व महसुस गर्नुहुन्छ ।
Gufgaf ✎ अभिनेता पल शाहले सिनेमा ‘अनुराग’ छोडेका छन् । पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतमको निर्माण तथा अभिनय रहने यस सिनेमाका लागि पल..
“किन आज कल तिम्रो मनमा” पल–पूजाको केमेस्ट्रि
‘म यस्तो गीत गाउँछु’ फेरि ट्रेण्डिङमा, यस्तो छ ट्रेण्डिङबाट हराउनुको कारण